Iindaba Ezixhamlayo I-Spring No. 6 - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya I-6 Spring 2018
Siyakwamkelwa kwi-Spring No. 6 ye-News Rewarding. Sinamabali amaninzi kunye neendaba kuwe. Gcina up-to-date kunye nosondlo lwethu lwe-Twitter rhoqo kunye neeblogi zeveki kwikhasi lasekhaya.
Lo mfanekiso we-cherry blossom ephakamileyo kwathathwa eWashington DC nje emva kweSigqeba soMhlaba esiye saye khona ekuqaleni kuka-Epreli. Okumangalisa kukuba, sasinomxholo oqaqambileyo apha e-Edinburgh iintsuku ezimbalwa ezedlulileyo.
Umgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi
Oogqirha baqinisekisa oko sikhankanyayo
INgqungquthela ye-5th International kwiZiqhelo zokuziphatha
Iifoto zoonografi ezifutshane
I-Coalition yokuQeda ukuThatshazwa kwezesondo, eWashington DC
Isilumkiso se-Porn- "Umnyhadala weFilimu" wabucala
Iigreyitha zeGrey kunye neentolongo zeejele
I-Facebook kunye ne-Youtube
Ukuxhatshazwa ngoTywala-vs-Porn Addiction, njengoko kugqitywe yi-BBC
UKuqinisekiswa kobudala be-UK
Ngokuqinisekileyo awuyi kufumana amanqaku evela kwimibutho eninzi edibeneyo kunye nokucela ukuba ungene kwi database yabo. Ewe, ukuba ufuna ukuqhubeka uva kwi-Foundation Reward uza kufuneka uphendule kwisicelo oza kufumana kuthi kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Sithemba ukuba uya
Sasibalekela yokuqala kwiklasi yethu ye-Royal Royal College of General practitioners-evunyelwe, ii-workshops zemihla ngemihla kwiimpembelelo ze-intanethi kwiimpilo zengqondo kunye nempilo e-Edinburgh kule veki. Ezi zintathu zilandelayo ziya kwenzeka ELondon, eManchester naseBirmingham kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ukuza kuthi ga ngoku, ii-GPs ezizimeleyo zikuqinisekisile esikukrokrelayo- ukuba babone ukonyuka okukhulu kwenani lezigulana ezingamadoda ezibonisa ukungasebenzi kakuhle ngokwesondo okunje 'ngokulibaziseka ukunyuka' (ihlala isisandulela sokungasebenzi kakuhle kwe-erectile), i-anorgasmia (ukungakwazi ukuya kwi-orgasm) kunye nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
Oku kwenzeka kuphela kwiminyaka embalwa edluleyo kwaye iyahambelana nokufumaneka kwe-free, i-hardcore porn kwiifowuni kunye namacwecwe. Kukho naziphi ezinye izinto ezinokubangela, kodwa imali yethu yecala eliphambili lichaphazela ukusasazeka kwi-intanethi ye-intanethi.
Oogqirha bayazi ukuba i-Viagra kunye namachiza okuphucula ama-erectile, asebenzi kakuhle kwiimeko ezininzi ukunciphisa umba. Isizathu asisebenzisayo kukuba ingxaki "ayikho ngaphantsi kwebhanti", oko kukuthi ukuhamba kwegazi kukubaluleke kakhulu kwizitho zendoda, kodwa kunokuba kuphazamise ukubonakaliswa kwesibindi kwiqondo "kubhanana". Ukuba awuboni uGary Wilson inkulumo ehlekisayo kunye neyokwazisa i-TEDx "Inzame enkulu yezononono" kulo, yibone Apha.
Oko okufunyanwa ngabagqirha bezempilo bevela kuphando olwandayo, ukumangalisa kwabo, kukuba zonyango Ukungasebenzi kwe-erectile 'yinto', kwaye ihluke kwiinkcukacha ze-erectile ezichaphazelekayo ezinxulumene namadoda amakhulu. Oku inqaku uchaza umahluko. Nalokhu kunjalo intshumayelo kwimvelaphi e-ED eninzi ngenkxaso yenzululwazi.
Nceda ubhalisele kwiindibano zethu zokusebenzela ukuba ukhona kwisaziso esifutshane okanye uvumele oogxa bakho ukuba bazi. Siya kubhengeza imihla ezayo emva kwe2018.
I-CEO yethu uMary Sharpe umemezelwe nguMongameli weColor Cavendish College, eCambridge, uJackie Ashley ( Guardian umlobi kunye nomfazi wezopolitiko u-Andrew Marr) ukuthetha ngempembelelo ye-intanethi ye-intanethi yengqondo yobutsha ngoLwesine 7th Juni 2018. Yabona Apha ezinye iinkcukacha. Yisiganeko samahhala. Yiza ukuba unakho.
5th INgqungquthela Yomhlaba Yonke kwiZenzo zoLungiso
I-Foundation Foundation yavuya gqitha ukwenza okokuqala ukuthetha kwiindawo ezidumile Nkomfa yeCBA eqhubeka eCologne, eJamani 23-25 ​​Epreli. I-ICBA izisa i-neuroscientists kunye noochwephesha beengcali kwihlabathi liphela ukubonisa uphando lwamva nje malunga nokuziphatha gwenxa. Iziganeko zeTED ziyayitya intliziyo yakho! Apha kulapho isenzo sokwenyani sinokufunyanwa khona. UNjingalwazi Stark wanikela intetho ephambili ngokushwankathela icandelo elipheleleyo lophando lwezenzululwazi kwiziphumo zokusetyenziswa kwamanyala. Yayiyinyani yeklasi eyiyo.
UDarryl Mead wabonisa umsebenzi wobubele ekunxibelelweni koluntu ngempembelelo ye-intanethi ehlaleni namhlanje. Wathetha ngezicwangciso zethu zezifundo ezisekelwe kwizikolo, ii-workshops zabasebenzi bezempilo, amagqwetha, abasebenzi bakarhulumente kunye nootitshala kunye nokwenza umsebenzi wezinzululwazi kufinyeleleke kwabo bawufunayo. Oku kwakuquka ukuhlaziywa kwamaphepha ezesayensi kwi-intanethi ye-intanethi yenkomfa ye-ICBA yonyaka odlulileyo e-Israel.
Ukuba unomdla kweli phepha elihlaziywe ngontanga, sinokukunika unxibelelwano oluya kukuvumela ukukhuphela iphepha kumshicileli. Isivumelwano sokushicilela sivumela kuphela inani elincinci leikopi zamahhala ezifumanekayo. Silindele ukushicilela ukuhlaziywa okutsha ngokusekelwe kumaphepha eenkomfa ze-2018 kamva kwiphephancwadi Ukunyanzela ngokwesondo kunye nokunyanzelisa.
Ukuba unokliniki okanye unomdla kwindlela yokusetyenziswa kweefostile ezinokuthi ingabonwa ngayo, unokufumana ixabiso kwisixhobo esitsha esibizwa ngokuba yi-short pornography Screener. Kwakungomnye ubuncwane oboniswe kule nkomfa ye-ICBA yonyaka. Kunyaka odlulileyo siye sincoma ukuba ixesha elide, elincinci elibizwa ngokuba yi-screener Iingxaki zoononopopayi Sebenzisa i-Scale ngemibuzo eli-18, kodwa esi sixhobo sitsha sinemibuzo emihlanu kuphela. Inkqubo ye- Iifoto zoonografi ezifutshane ikhangeleke ukuba ibe yimpumelelo ebalulekileyo ekunikezeni abaSebenzi abaPhezulu isixhobo esinokukhawuleza ukusetyenziswa kwisithuba esiqhelekileyo sokuqeshwa kwe-NHS.
Savuyiswa ukuba sikwazi ukuthatha inxaxheba kulo mangalisa I-Global Summit kunye nabasebenzi be-600 nabasemagunyeni abavela kumaziko amakhulu emhlabeni. Iintetho zasakazwa zihlala kwi-Facebook kwaye ziyafumaneka kwi-intanethi. Unokuva uNjingalwazi uGail Dines, umsunguli weNkcubeko, cacisa u mahlukophakathi kobudlobongela obunzima kunye nobufazi be-liberal, okokuqala bekunxamnye no-
Unokuphulaphula intliziyo eyenza ibali lomama oneminyaka engu-15 eneminyaka eli-15 ubudala ehlambulule enye intombazana eneminyaka eyi-15, ibanjwe kwaye ipapashwe ngosuku olufanayo njengomntu oneminyaka eyi-21 ubudala kwi-Backpage.com, indawo yesini abasebenzi, abaninzi babo babesetyenziswe. Wadlwengulwa ngamadoda amaninzi ngaphambi kokuba abathumbi bakhe baqaphele ukuba unina waqhagamshelana nePolisa kwaye wayeya kubo. Intsapho yayishiywe iqoke iziqwenga kunye nentombi engazange ibe nayiphi na inkathazo ngaphambili kwaye ibe ngumfundi wesikolo esihle. Wabonakalisa Jane Doe (akukho 3) ifilimu yerekhodi malunga nokuthengiswa kwabantu.
Sasigcinwa sixakekile nathi. Siququzelele intlanganiso kwiPhonografi kunye neQhinga lezeMpilo likaRhulumente kunye nabathathi-nxaxheba abangama-50 abavela kwihlabathi liphela ukujonga iindlela ezahlukeneyo kunye nokwabelana ngezimvo ngendlela elungileyo. Siqokelele ulwazi oluncedo esilubeke kwingxelo yombutho we-NCOSE xa iyonke. Siphinde sanika iphepha elibonisa indlela yenoveli kwizilumkiso zempilo ezinokubonakaliswa ngaphambi kokuba umntu abukele iphonografi, kakhulu njengezilumkiso kwiipakethi zeecuba. Okungakumbi koku kwinto elandelayo engezantsi.
Abafundi abasuka kwiYunivesithi yase-Edinburgh's College of Art babeke umboniso okhethekileyo kwiReward Foundation ngo-Epreli. Njengengxenye yemizamo yethu yokwazisa malunga nemingeni ebetha uluntu namhlanje ngokusetyenziswa gwenxa kweefografi, size nombono wokubeka isilumkiso sempilo ekuqaleni kweeseshoni zoononophala, ngokufanayo nezilumkiso zempilo kwiipakethi zecuba. Ukuqhubela phambili lo mbono, sonwabile ukuba nethuba lokudibana nabafundi bemizobo kwiYunivesithi yase-Edinburgh's College of Art. Umsebenzi wabo yayikukudala i-20 ukuya kwi-30 yesibini yefilimu enokusetyenziswa ngale ndlela. Yayiyiprojekthi eyinxalenye yomsebenzi wabo wekhosi kwaye bayenza ngomdla omkhulu.
Iziphumo zithatha umoya. Kwakuyimbeko enkulu ukuba bamenywe ukuba bahlale kwikhosi yethu yecala eyimfihlo kunye neengxelo ze-12 ezivela kubafundi abadala kakhulu. Ukwahlukana kunye neempembelelo kwakukhulu. Sivuyiswe ukubonisa aba bathathu kubo abangaphezu kwe-200 abathunywa kwingqungquthela yempilo yoluntu ngokuxhaphaza ngokwesondo eWashington apho bafumana khona ngokufudumele. Abanye abenzi bomgaqo-nkqubo kunye nezopolitiko ezikhoyo zifuna ukulandelelana kulo msebenzi.
UMary Sharpe ubuyele Nolan Live kwi-BBC Northern Ireland nge-7th ka-Matshi 2018. Ikhonkco liya kukusa kwividiyo epheleleyo yeli candelo lomboniso. UMary waxoxa ngempembelelo yephonografi kwimpilo yengqondo neyasemzimbeni yabantwana kunye nomninimzi uStephen Nolan, kunye nomzabalazo woononophala kunye nokufumana umlutha wezobisi.
Njengoko kuchazwe kwiphepha leendaba yangaphambili, kunyaka ophelileyo i-CEO yethu uMary Sharpe wamiselwa njengomhlobo we-CYCJ esekelwe kwiYunivesithi yeStathclyde eGlasgow. Wayevuyiswa ukunikela intetho yakhe yentombazana ethi "Impact of Pornography kwi-Brain's Youth" kwingqungquthela yabo yonyaka malunga nomxholo Iigreyitha zeGrey kunye neentolongo zeejele. Oku kwenzeka ngosuku olufanayo ne-Nolan Live TV kwiBellfast.
Iilayidi ezivela kuzo zonke iintetho ziyafumaneka Apha kwaye intetho kaMary iqala ngo-P. 85-end. Kwakulithuba elihle lokudibana nokwabelana ngezimvo nabanye abaphandi kunye neengcali ababandakanyeka ngokunzulu kufundo lobulungisa kulwaphulo-mthetho eScotland namhlanje.
Siyavuya ukuvakalisa ikhasi lethu elitsha le-Facebook elijolise kwiindibano zocweyo esizifundisayo kunye nezinye iziganeko esizibonisa kuzo. Zive ukhululekile ukudibanisa nathi Apha.
Unokuphinda ube nomdla kwindlela encinane yokukhethwa kwamavidiyo esinawo ngoku Isiteshi se-YouTube. Kukho amavidiyo amaninzi azayo njengathi ngoku sinesicwangciso sokulungisa unxibelelwano oluninzi oluye lwarekhoda emhlabeni jikelele ngeengcali.
Kwiveki eveleleyo ubudlelwane bobubele Xelela wabizwa ukuba i-NHS yenze okungakumbi ukunceda ngomthwalo wabantu abafuna uncedo "lokuxhatshazwa ngokwesini". Kwakuphazamisa ukubona iindaba zeendaba ze-BBC kunye nezinye izinto ezithengiswayo ngokubhekiselele ekubeni 'ukuxhatshazwa ngokwesondo' njengaloo nto, oko kukunyanzelisa abanye abantu, kunokuba babone ukunyaniseka koononophelo kunye nokuphinga. Kuze kufinyeleleke lula kwi-porn-hardcore yafumaneka ngokukhululekileyo kwaye ifumaneka ngokulula nge -bandband ye-10 kwiminyaka edlulileyo, ukusetyenziswa koonobumba obungathandabuzekiyo kwakuncinci kwaye kwahlulwa ngoqeqesho loqeqesho lwezesondo njengoxinzelelo lwezesondo.
Nangona kunjalo ukudibanisa umlutha wesondo kunye nokulutha kwe-porn namhlanje akusafanelekanga, ubuncinci uninzi lweziyobisi ezingamanyala namhlanje. Kukwayisiphithiphithi esixhaphake kakhulu ngoochwephesha bezesondo. Bakhetha ukungayikhathaleli inzululwazi eqhubayo kwaye banyanzelise izizathu zezopolitiko ukuba akukho nto enjengokwabelana ngesondo okanye iziyobisi. Endaweni yoko batshintsha ingxoxo yamajelo eendaba baye kubantu abadumileyo abanjengoHarvey Weinstein okanye uTiger Woods besithi sisingxobo sendoda esisityebi ngokuziphatha gwenxa. Nangona kunjalo kwakucacile ubuncinci kumaphepha e-3 ophando kwinkomfa ye-ICBA ukuba uninzi lwabantu abanengxaki yokuziphatha ngokwesondo banengxaki yokusetyenziswa gwenxa kwe-porn, kunokuba baye kubathengisi bezesondo okanye izinto ezinje.
A vu melwano abaphengululi beengcali Lancet Xhasa udidi olutsha lokuqonda isifo '', eziza kubandakanya zombini iziyobisi kunye neziyobisi. Xa oko kupapashwa, oku kubhideka ngabom kuya kutyhilwa.
Kuyacaca ukuba ukufikelela ngokulungelelaniso oluphangayo kwi-smartphone kwisandla kuya kuholela ngokulula ukusetyenziswa ngokunyanzeliso kunokufuna amaqabane ebomini bokwenene kwaye uzama ukusebenzisana nabo ngesini. Senza konke okusemandleni ethu ekuncediseni ootitshala beendaba kule ndawo.
Lo mthetho mtsha uza kuqala ukusebenza ebudeni balo nyaka. Ibhlog ebalaseleyo kwaye icace gca evela kumhlobo wethu John Carr Uxelela ibali ukuba kutheni oku kubaluleka nokuphuhlisa okulungileyo kubantwana base-UK.
Njengobubele obunothando phakathi kwezinto esizifundisayo, sicinga ukuba kufanelekile ukukhankanya ukudlula kukaKenneth John kunye noDoris Ivy Mead, abazali be-Co-founder's Foundation Reward Foundation, uDarryl Mead. Sivuyisiwe gqitha ukuba sijoyine nabo e-Australia ukugubha umkhosi wabo womtshato we-74th ngo-19 ngoFebhuwari kulonyaka. Emva kweeveki ezintathu kuphela, uKen wadlula ebuthongweni bakhe kwiminyaka yobudala be-94. I-Dot, i-93, ibhinqa elahlala ngoKen, ladlula ngokucokisekileyo ekuphumeni kwayo ngoLwesine odlulileyo, iiveki ze-8 ukuya kutsho emva kokuthandwa kwakhe. Wasitshela ukuba akakwazi ukunyamezela ubomi ngaphandle kwakhe.
Kube lilungelo lokubabazi bobabini, bebona ukunakekelwa ngothando kunye nokuzinikela ekusebenzeni kodwa banandipha nje ngokuthanda kwabo, abahlala bexhasa, inkampani. Siya kuphinda sijonge i-Ken kunye nokuguqulwa kwamabinzana, kunye nokuphakama kukaDot kunye nesitayela.
Xa ndabuza uDot ngosuku lomtshato wam kuDarryl kwi-2012, yintoni eyayiyimfihlo yomtshato omdala onomdla, waphendula wathi, "Ungaze uphikisane. Akukho nto enokubambisana ngayo ". Ndivuyayo ukudlula kula mazwi obulumko evela kumamazala omthandayo owathanda kakhulu kwaye wayemthanda kakhulu. Akuzuzi ngcono kunoko.
I-Potting Melting, i-5 Rose Street
Unga hlaziya zakho iinketho or ungabhalisi phantsi kweli luhlu.